mitete - ALinks
Lahatsoratra momba ny manodidina
Fitaterana any Pakistan
Janoary 9, 2022 Demi mandehana, Pakistan
Jona 6, 2020 Demi mandehana, Oganda
Te handeha amin'ny UK ianao ?? Ampiasao any Angletera ireo fitaterana ireo !!
Enga anie 20, 2020 Demi mandehana, UK
Ny fitaterana any amin'ny làlambe UK sy ny lalambe no làlambe fitaterana an-trano voalohany any Angletera. Misy lalana 225,000 362,000 kilaometatra any Britain. Ny fivezivezena amin'ny fiara, na fiara na taxi dia be indrindra amin'ny fomba fitaterana, kaontim-bola
Enga anie 20, 2020 Demi Shina, mandehana
Diniho France, miaraka amin'ny Fitaterana tsara indrindra
Enga anie 19, 2020 Shubham Sharma Frantsa, mandehana, Travel
Ny fitaterana any Frantsa dia mahavariana ary koa ny tsara indrindra any Eropa. Ny tamba-jotra any Frantsa no be mpampiasa ary iray amin'ireo tambajotra vaventy indrindra eto an-tany koa. Paris natao ho toy ny ivon-toerana sy tranonkala fitaterana
Mandehandeha any Italia: Torohevitra fitaterana !!
Enga anie 18, 2020 Demi mandehana, Italia
Ny ampahany lehibe amin'ny fanomanana ny fialan-tsasatra italianinao dia ny fandehananao ary, ny ankamaroany, ny fomba fanaovanao izany. Ny fahatakaranao isan'andro any Italia dia niavaka tamin'ny dia nataonao. Ny iray amin'ireo safidy mora indrindra dia ny fiaran-dalamby. Fanofana
Ny Fahatrarana Fomba Ampiasaina indrindra any Rosia
Enga anie 17, 2020 Demi mandehana, Rosia, Travel
Rosia dia firenena midadasika misy halavirana lavitra, fa na dia ny fitsidihanao voalohany an'i Russia aza dia tsy sarotra ny mankany amin'ny toerana alehanao. Ny tena zava-dehibe dia ny drafitra ny làlanao, toy ny amin'ny toerana tsy fantatra rehetra